Madaafiic ay Ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xalay u qeybiyay dadka rayidka ah ee ku nool magaalada Muqdisho oo dhimasho iyo dhaawac badan keenay iyo Shariif Xasan iyo Sheekh Adan Madoobe oo la filayo in u kala baqoolaan London iyo Nayroobi dhawaan. Ruunkinet 20/02/07
Madaafiic aan loo meel dayin oo ay ku rideen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dadka rayidka ah ee ku nool xaafo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dad ka badan 15 ruux halka ay qaar badan oo kale ku dhaawacmeen.
Ciidamada Itoobiya ee u sugan Villa Soomaaliya, xarunta ciidamada xoogga dalka, Dekedda weyn iyo gobo kale ayaa madaafiic aan horey loo maqan ku riday xalay saq dhexe xaafada dhowr ah oo ku yaal magaalada Muqdisho.
Arrintan ayaa ka dambeysay kagadaal markii maleeshiya hubeysan ay weerar ku qaadeen goobo ay deggen yihiin ciidamada Itoobiya oo ku yaal magaalada Muqdisho.
Goobaha ay weerareen maleeshiyada hubeysan ee ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin Villa Soomaaliya, dekedda, Isbitaalka Digfer iyo xarunta ciidamada xogga dalka.
Dhanka kale, warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in xildhibaan Sheekh Adan Madoobe oo ay xildhibaannada ku sugan Baydhabo u doorteen guddoomiyaha baarlamaanka uu aadi doono magaalada Nayroobi ee dalka Kenya berri oo Arbaco ah.
Aaditaanka Sheekh Adan Madoobe ayaa la sheegay in ay ka dambeysay casumaad uu guddoomiyaha baarlamaanka dalka Kenya u fidiyay Sheekh Adan Madoobe.
Sidoo kale, warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in xildhibaan Shariif Xasan oo ay dhawaan xilka ka qaadeen xildhibaanada jooga Baydhabo uu soo gaari doono magaalada Londond ee dalka UK.